Ndị na-ahụ maka ihe nkiri na ndị na-ebubata ya - China Visual Scarers Factory
6803 igwe anaghị agba nchara ụba mama mama ofufe ọnyà Oriọna
Foldable Screen Rat Afia 3006
Nnụnụ Spike S40
Nnụnụ Spike 5010-50
Nnụnụ Na-atụ Egwu BST-H
Nnụnụ Na-atụ Egwu
Ihe nkpuchi Holographic na-asọpu dị ka nnụnnụ nwere ihu abụọ. Zuru okè iji weghachite nnụnụ na ìhè na mkpọtụ, Teepu ahụ na-enye nchebe maka ihe ọkụkụ na mkpụrụ osisi. Ihe egwu egwu: 2.5cm (1 inch) n'obosara, gosipụtara ezi nhọrọ iji chụpụ nnụnụ site na mkpọtụ ọkụ na ikuku. Ihe: Mere nke ihe na-adịghị egbu egbu, dị mfe, dị irè na nke nwere mmekọrịta gburugburu ebe obibi, ịhụ laser na ụkpụrụ iris na-enye nsonaazụ kacha elu iji mee ka nnụnụ na-atụ ụjọ pụọ n'ubi gị, mkpụrụ osisi, osisi, osisi na akwụkwọ nri.
Nnukwu nnụnụ na-atụ egwu BSB-01
Nnụnụ Na-atụ Azụ Nnụnụ
Na-egbochi nnụnụ ịtọbe ụlọ na ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ịingụ oriri na osisi mkpụrụ osisi! Chebe stucco, sidings, ụgbọala, ụgbọ mmiri na ubi si akwu, corrosive nnụnụ nsị na ụdị ndị ọzọ nke nnụnụ mmebi. Nabata patio na mbara ihu ma chekwaa oge na ego na nzacha na ndozi. Atọ na agba.
Anya nnụnụ na-atụ ụjọ TE-01
Anya nnụnụ na-atụ ụjọ
Nnụnụ na-ahụkarị egwu egwu, "anya" na-agbaso ụdị nnụnụ ọ bụla
Kemgbe ụwa, anyị nwere ike iji ọgwụ nnụnụ mebie ya.
Nnụnụ Na-atụ Ahụ Ike Na-efe Efe
Iberibe egbe egbe na-eme ka nnụnnụ ndị na-efe ihe ọjọọ pụọ na ihe ọkụkụ. Ihe eji eme ihe zuru ezu gụnyere egbe, fịbaglas telescopic pole na string
Nha nke telescopic osisi: 6mx19mm osisi ma ọ bụ 10m x28mm osisi
Prowler Ikwiikwii DO-F1
Ikwiikwii decoy na nku na-efe efe: egwu na-eyi egwu. Akụkụ ndị na-agagharị na ikuku na-eme ka ihe dị adị n'ezie. Mee ka nnụnụ ndị a na-achọghị na obere ụmụ ahụhụ ndị ọzọ pụọ. Na-ewepụ nhicha na nrụzi metụtara anụ ahụ.
Nnụnụ Na-atụ Egwu BST-R
Nnụnụ na-atụ ụjọ na-atụgharị uche: Ihe ngosi nnụnụ na-atụgharị uche nnụnnụ egwu teknụzụ ọkachamara dị arọ dị na teepu dị, ogo dị elu nke ndị ọkachamara na-eji eme ihe, jiri ọtụtụ narị acres nke ubi vaịn na ubi mkpụrụ osisi.